वाट्सएप अपडेट गरीन्छ थ्रीडी टच र द्रुत प्रतिक्रिया समर्थन गर्दै आईफोन समाचार
लुइस प्याडिला | | आईफोन अनुप्रयोगहरू, iOS 9
यो पर्खाइ सकियो, यद्यपि यो लामो भयो (यसको सामना गरौं, धेरै लामो छ) अन्तमा हाम्रो क्षेत्रमा सबैभन्दा व्यापक मोबाइल सन्देश सेवा हामीलाई अपडेट गरीएको छ जुन एप्पलले आइओएस in मा मा ल्या ago्ग ल्याएको सबै सुधारहरू प्रस्ताव गर्‍यो, साथै लाँग- द्रुत प्रतिक्रियाको प्रतिक्षामा छ। व्हाट्सएप २.१२..9, जुन सहि संस्करण हो जुन भर्खरै सुरू गरिएको हो र अब तपाईंलाई स्टोरमा उपलब्ध छ आफ्नो उपकरणहरूमा डाउनलोड गर्नका लागि, यसले सूचनाहरू आफैंबाट सन्देशहरूको द्रुत प्रतिक्रियाको साथसाथै ल्याउँदछ, नयाँ थ्रीडी टचको साथ अनुकूलता आईफोन s एस र s एस प्लस को।
हामी भन्छौं कि अपडेटले तपाईंलाई अब अनुमति दिन्छ अधिसूचनाबाट नै व्हाट्सएप सन्देशहरूको जवाफ दिनुहोस्। तपाईंले अबदेखि च्याट खोल्न र सम्बन्धित च्याट प्रविष्ट गर्न प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। अब तपाईले सूचना भर्नु भएको बित्तिकै तपाईलाई स्लाइड गर्नुपर्नेछ, र छविमा भएको बक्स आउँनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ र सिधा पठाउन सक्नुहुन्छ। लक स्क्रिनबाट उही कार्य गर्दछ: सूचनालाई बाँयामा स्लाइड गर्नुहोस् र जवाफमा क्लिक गर्नुहोस्, र उपकरण अनलक नगरी तपाईं तपाईंलाई पठाईएको सन्देशमा जवाफ दिन सक्षम हुनुहुनेछ। यस क्षणमा हामी निश्चित रूपमा थाहा छैन तर हाम्रा पाठकहरूले हामीलाई बताउँदछन् बाट द्रुत प्रतिक्रिया समारोह आईओएस Bet .१ बिटा with मा मात्र उपलब्ध छ, यदि यो पुष्टि भएमा, वास्तवमै अनौंठो हुनेछ।
यो द्रुत जवाफ पनि तपाईंलाई एप्पल वाचबाट जवाफ दिन मद्दत गर्दछ। यद्यपि अद्यावधिकले वाचोस २ का लागि नेटिभ एप्लिकेसन ल्याउँदैन, यो सुविधासँग उपयुक्त रहनुको सरल तथ्यले तपाईंलाई पहिले नै अनुमति दिन्छ कि जब तपाईं आफ्नो एप्पल वाचमा सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं आईओएसको पूर्वनिर्धारित प्रतिक्रियाहरू व्हाट्सएप सन्देशहरूमा प्रतिक्रिया दिनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
र अन्तमा थ्रीडी टचको साथ अनुकूलता यसले हामीलाई आईफोन s एस र s एस प्लसको नयाँ फंक्शन प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ नयाँ कुराकानी सुरु गर्न वा पहिले नै हाम्रो स्प्रिboardबोर्डको आइकनबाट सुरु गरिसकेका अनुप्रयोगहरू मध्ये कुनै एकको खोजी गर्न सक्षम हुन, पहिले अनुप्रयोग खोल्नु बिना नै।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS9» वाट्सएप अपडेट गरीन्छ थ्रीडी टच र द्रुत प्रतिक्रियालाई समर्थन गर्दै
एन्ड्रोइड जस्तै डिजाइन छ? किनकि यदि यो केस हो भने म यसलाई अपडेट गर्दिन।
मेरो नयाँ आईफोन S एसमा पिक र पप प्रयोग गर्न पाउँदा म कत्ति उत्साहित भएँ। यो एकमात्र व्यक्ति हो जसले लिंकमा यसलाई समर्थन गर्दैन।
द्रुत उत्तर आईफोन s एसको लागि मात्र विशेष हो ?? किनकि म यो आईफोन do मा गर्न सक्दिन।
क्याप्चरहरू Plus प्लसबाट आएका हुन्, स्पष्ट रूपमा थ्रीडी टच बाहेक
मेरो शंका स्पष्ट गर्न को लागी धन्यवाद। द्रुत जवाफ सक्रिय गर्न के त्यहाँ एक विकल्प छ? मैले आईओएस with लाई अपडेट गरें र यसले मेरो लागि काम गर्दैन।
म WhatsApp सेटिंग्स मा कुनै नयाँ मेनू देख्दिन
तपाईंले कुन आईओएस स्थापना गर्नुभयो?
द्रुत उत्तर आईफोन s एस, आईओएस for को लागि काम गर्दैन
jolin, यसले मलाई अद्यावधिक गर्न दिदैन ... यो अरू कसैलाई हुन्छ?
तपाईं मात्र एक हुनुहुन्न, धेरै प्रयोगकर्ताहरू गुनासो गर्छन् कि उनीहरू अपडेट हुन सक्दैनन्, कृपया धैर्य गर्नुहोस्।
मारियानो बी भन्यो
स्पष्ट रूपमा द्रुत उत्तर नयाँ आईफोनसँग मात्र काम गर्दछ। Plus प्लसबाट, अपडेट गरिएको व्हाट्सएपको साथ यसले मलाई नयाँ फंक्शन प्रयोग गर्न दिदैन ...
मारियानो बी लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन Plus प्लस छ र मसँग त्यहि समस्या छ। मैले यसलाई अपडेट गरेको छु र मैले अझै सूचनाहरूबाट प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिन सक्दिन। नयाँ एप्पल वाच सुविधा मेरो लागि पनि काम गरिरहेको छैन। अधिक के हो, AppStore मा अपडेटको वर्णनमा केहि द्रुत प्रतिक्रिया वा घडीबाट आउँदैन।
Betis1907 लाई जवाफ दिनुहोस्
वर्णनमा यसलाई राख्दैन तर तिनीहरू अवस्थित छन् तपाईले यस लेखको छविमा देख्न सक्नुहुन्छ।
एन्डरसन गार्सिया भन्यो
यसले मलाई एप्पल वाचबाट प्रतिक्रिया दिन दिदैन, र म6आईफोन Plus प्लसमा पनि द्रुत प्रतिक्रिया पाउँदिन।
एन्डरसन गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
के यो आईओएस .9.1 .१ को साथ सक्रिय हुनेछ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन ... मसँग 9.1 .१ छ, तर मलाई लाग्दैन कि यो त्यसमा निर्भर छ कि यो विचार गरी रहेछ कि यो अझै आधिकारिक संस्करण हैन
यो अद्यावधिकको विवरणमा विस्तृत नभएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो हुन सक्छ कि यो संस्करणको लागि एक नवीनता हो।
ट्विटरमा एक व्हाट्सएप बीटा परीक्षकले के भने, मात्र यसले आईओएस .9.1 .१ मा मात्र काम गर्दछ। यदि त्यसो हो भने, यो बुझ्छ कि तिनीहरूले यसलाई अद्यावधिक वर्णन बीचमा समावेश गर्दैनन्।
आईओएस .6 .०.२ को साथ मसँग आईफोन and छ र यसले मलाई अनुमति दिदैन ...
चावालाई जवाफ दिनुहोस्
उसले मलाई या त अद्यावधिक गर्न दिदैन ... के यो यस्तो लामो-प्रतीक्षित अपडेटको साथ हुन सक्छ कि हामी सबै यसमा छौं र उसको सर्भर खसेको छ ???
म अपडेट गर्न सक्दिन, म के गर्ने?
रिचार्डग्जलाई जवाफ दिनुहोस्
luis gonzalez भन्यो
मसँग आईफोन update अपडेट छ र यदि मैले द्रुत उत्तरहरू पाएँ भने
लुइस गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
आईओएस १ bet बिटा।
संस्करण .6 .०.२ मा एक आईफोन With को साथ म त चाँडो उत्तर पनि पाउँदिन
यस अद्यावधिक सम्बन्धमा स्थापना जवाफहरू आईफोन 6. का लागि काम गर्दैन। FA ILILILILILILILIL ILILILILILILIL ILILILILLLLLLL
त्यो के हो? के यो आईफोन6एस को लागी मात्र प्रयोग गर्दछ ??? लिनको लागि ... आईफोन UP मा अपडेट र केही पनि छैन ...
मसँग s एस छ र मैले भर्खर अपडेट गरें र द्रुत उत्तरले मेरो लागि काम गर्दैन
यागोलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ कि यो आईओएस 9.1 .१ को लागि मात्र हो किनकि आईओएस .9.0.2 .०.२ को सबैजना देखा पर्दैन, मसँग आईओएस .9.1 .१ बीटा and छ र यदि द्रुत उत्तर देखा पर्छ भने
मैले पढिरहेको कुराबाट यस्तो देखिन्छ कि व्हाट्सएपले यसलाई बीटाको लागि मात्र राखेको छ, यो पहिले नै मूर्खताको उचाई हो
यसले मलाई या त अद्यावधिक गर्न अनुमति दिदैन, र त्यो मात्र होईन, यसले मलाई म्याक वा आईफोनबाट आईट्यून्स स्टोरमा जडान गर्न अनुमति दिदैन। र मैले यसलाई दुई भिन्न खाता र कुनै चीजको साथ प्रयोग गरी सकेको छैन।
त्यहाँ एप्स स्टोर र आईट्यून्सको साथ बगहरू छन्, एप्पल आफैंले पुष्टि गरेका छन्
आईफोन5मा यो पूर्ण रूपमा कार्य गर्दछ, आईओएस .9.1 .१ बिटा।
मेरो आईफोन s एस + मा द्रुत उत्तर कि त देखा पर्दैन 🙁
आईफोन s एस आईओएस .6 .०.२, द्रुत उत्तरहरूले काम गर्दैन ...
छिटो प्रतिक्रियाहरूमा अप्प्स अपडेट हुन्छ र एप्सस्टोर खस्छ? संयोग? .. होइन !! युगको अन्त्य! LOL
पुनश्च: यदि तपाईं टिप्पणीहरू पढ्नुहुन्छ भने यो प्रकार्य केवल .9.1 .१ को लागि हो, त्यसैले आधिकारिक बाहिर आउनको लागि कुर्नुहोस्।
यो केवल आईओएस .9.1 .१ मा मात्र काम गर्दछ, स्पष्ट रूपमा बीटाको लागि, किनकि यो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन।
यो स्पष्ट छ कि यो आईओएस .9.1 .१ बाट छ। पर्खनु
ElpaciEl लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले द्रुत प्रतिक्रिया रdडी स्पर्श विकल्प देखा पर्नका लागि अनुप्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्‍यो।
Chiskoruiz लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले पहिले नै व्हाट्सएप अपडेट गरिसकें र मसँग .8.4.1..XNUMX.१ छ तर मँ केही साधारण सूचनाहरूको लागि आईओएसबाट अपडेट गर्ने छैन म जेलरोडको लागि कुर्नेछु जुन आशा गर्छु कि लामो समय लिने छैन।
द्रुत जवाफहरू आईओएस Bet .१ बिटा with मा मात्र काम गर्दछ।
Fernelis Agramonte भन्यो
WHATSAPP सूचना केन्द्रमा द्रुत प्रतिक्रिया केवल ios 9.1 Beta, ios 9.02 र कम संस्करणहरूमा यसले काम गर्दैन।
Fernelis Agramonte लाई जवाफ दिनुहोस्
उसले मलाई या त अद्यावधिक गर्न दिएन, तर एक घण्टा भित्र म सफल भएँ। द्रुत प्रतिक्रिया म IOS6संग आईफोन 9.0.2 मा या त मेरो लागि काम गर्दैन
कुनै विचार वा टिप्पणीहरू?
म किन अपडेट पाउन सक्दिन? अनुप्रयोग स्टोरमा म नयाँ अपडेटको विवरण पाउँछु तर अपडेट सेक्सनमा मैले अनुप्रयोग पाउँदिन। मँ संस्करण २.१२..2.12.7 छ जब यो कार्य २.१२..2.12.8 मान्नुपर्दछ ... के हुन सक्छ? मसँग आईओएस .9.1 .१ बिटा। छ
बीटासको आन्तरिक कोडमा आईओएस .9.1 .१ बाट उपलब्ध छिटो प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो
द्रुत प्रतिक्रियाहरू IOS .9.1 .१ बिटासँग मात्र काम गर्दछन्। आधिकारिक संस्करण बाहिर आउन प्रतीक्षा गर्दा, तपाईं धैर्य हुनुपर्नेछ।
उत्तर  वाचबाट र ios9.2 beta5 बाट द्रुत उत्तर मेरो लागि काम गर्दछ
द्रुत उत्तरले आईओएस .9.1 .१ बिटा। मा मात्र काम गर्दछ
AppStore को अद्यावधिकमा .. यो म छिटो उत्तर छ कि बाहिर आउँदैन, त्यसैले मलाई थाहा छैन कि कसले आविष्कार गरेको छ।
कसैले पनि यसलाई आविष्कार गरेको छैन, तपाईं लेखको स्क्रिनशटहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुनमा यसमा के भनिएको छ स्पष्टसँग देखिन्छ।
यो संस्करण २.१२..2.12.9 मा फेरि अपडेट गरिएको छ
आईओएस .9.1 .१ मा अपडेट हुन बेकार छ किनकि यदि द्रुत प्रतिक्रियाले काम गर्दछ भने पूर्वावलोकन सक्रिय गर्न आवश्यक हुन्छ र यसैले सबैले तपाइँको सन्देशहरू लक स्क्रिनमा देख्छन्।
यो २.१२.? मा अद्यावधिक गरिएको छ। यदि तपाईंलाई यससँग द्रुत उत्तर छ भने के तपाईंलाई थाहा छ?
मेरो अज्ञानता माफ गर्नुहोस् तर म सबैले बीटा भन्छु कि हेर्नुहोस्। तर बीटा के हो?
अल्फा संस्करण: परीक्षण संस्करण जुन केवल विकासकर्ताले प्रयोग गर्दछ र उनीहरूको वातावरणबाट केही छानिएका व्यक्तिहरू।
बीटा संस्करण: परीक्षण संस्करण जुन अधिक व्यक्ति प्रयोग गर्दछ, अब विकासकर्ताको सर्कल मात्र रहदैन।
आईओएसमा त्यहाँ सार्वजनिक बीटा पनि हुन्छ, जुन सामान्य बेटा संस्करण हो, तर अझ उन्नत बिन्दुमा।
अन्तिम संस्करण: सबैको पहुँच छ र यो पहिलो आधिकारिक स्थिर संस्करण हो।